HARGEYSA: Guddida Wanaag-farista iyo Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta oo qab-qabtay Sixiroolayaal dhaqan-xumo ku aafeeyey Haween badan | Somaliland Post
Home News HARGEYSA: Guddida Wanaag-farista iyo Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta oo qab-qabtay Sixiroolayaal dhaqan-xumo...
HARGEYSA: Guddida Wanaag-farista iyo Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta oo qab-qabtay Sixiroolayaal dhaqan-xumo ku aafeeyey Haween badan
Hargeysa (SLpost)- Guddida Wanaag farista iyo Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta ayaa qab qabtay Sixiroolayaal aan haybtooda la garanayn oo dhaqan xumo iyo Diin la’aan u horseeday Qoysas badan oo Reer Hargeysa ah, kuwaas oo ku kacay falal gabood fal ku ah sharafta iyo dadnimada Haween badan oo la macaamilay.
Sixiroolayaasha oo lab aka mid ah lagu soo qabtay Xaafada Daami iyo Kililka Shanaad (Sh Nuur) ayaa la sheegay in ay muddo sanado ah kaga shaqaysanayeen Hargeysa qaab Cilaaj, waxaana lagu soo waramayaa in lagu soo qabtay Cajalado ay iska duubeen oo la sheegay in ay guryahooda yaaleen kadib markii uu si qarsoodi ah uga soo xaday nin la sheegay in mid ka mid ah Sixiroolayaasha uu gurigiisa ugu samaynayey Telefishan ka xumaaday.
Illaa hada Xukuumadda Somaliland iyo Guddida wanaag farista midkoodna kamuu hadal dhacdadan hase yeeshee wararka hordhaca ah ayaa sheegaya Sixiroolayaashan in ay ku jireen guryo ka waaweyn am aka qurux badan guryaha ay galaan masuuliyiinta Somaliland, iyagoo la sheegay dhaqaalaha ay ku samaysteen in ay ka urursadeen Haweenka ay duufsadeen kooxdan oo u muuqda in ay faleen.
Sidoo kale, wararku waxa ay sheegayaan in ay samaysteen Askar la sheegay in ay ka tirsan yihiin Booliiska kuwaas oo ay kiraysteen isla markaana ka ilaalin jirtay cid kasta oo isku dayda in ay faragaliso hawlaha dhaqan xumada ah ee ay wadaan.
Wararka ka soo baxaya ayaa sheegaya guryaha ay nimankani deganaayeen ee laga soo qabtay in ay bar kulan u ahaayeen haween badan oo isugu jiray Xaasas iyo Gabdho dhalinyaro ah, kuwaas oo ay u shidi jireen cajalado Qur’aan ah, halka Sixiroolayaashani ay ka yihiin sida ay dadka la jaarka ahi ku soo warameen Diin iska daaye in aanay Eray ka aqoon Qur’aanka ay dadka ku khiyaamaynayaan.
Ninka fashiliyey labada nin midkood oo ah ka laga soo qabtay xaafadda Daami ayay dadka jaarku sheegayaan maalintii ugu horaysay ee xaafada lagu arko in uu qaawanaa oo aanu xataa kabo xidhnayn, iyagoo sheegay in uu soo raacay nin ka mid ah dadka xaafadda degan, kaasoo markii danbe iska eryey, hase yeeshee waxa uu degay jiingad yar oo ku dhex taala xaafaddaasi oo aan ka fogayn, halka uu markiiba ka kiraystay guri shan makhsin ah oo cusub, halkaas oo uu ka faraqabsaday markiiba.
Talaabada Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta iyo Guddida Wanaag faristu sida wadajirka ah u qaadeen ayaa ku soo beegmaysa maalmo kadib markii Madaxweyne Axmed Siilaanyo ku dhawaaqay in ay dalka ku soo kordheen falal dhaqan xumo ah, isagoo u saaray guddi Heer Qaran ah oo talaabo ka qaada qofkii lagu qabto.
Sheekh Maxamed Maxamuud Xiiray oo ah guddoomiyaha Guddida wanaag farista oo aanu Telefoonka kula xidhiidhnay ayaa Xukuumadda ugu baaqay in ay ilaaliso dharafta dadweynaha Reer Somaliland, isagoo ku baaqay in si deg deg ah wax looga qabto mushkiladaha Cilaajyada oo uu ku tilmaamay in ay yihiin Goobaha lagu qaldayo bulshada isla markaana Haweenku u nugul yihiin.
Sidoo kale, guddida Wanaag farista oo sameecado kula wareegayey xaafadaha mashaqadani ka dhacday ayaa dadweynaha ugu baaqay in ay ka foojignaadaan isla markaana ka fogaadaan Dad dhaqankooda, Diintooda iyo Xoolahoodaba ku fasahaadinaya, iyagoo ku booriyey in ay soo sheegaan meelaha falalka caynkan oo kale ahi ka jiraan ee magaaladda ka jira.
XIGASHO: Wargeyska Waaheen